Ulwenziwo lokuthile - Ningbo Rumotek Magnetic Technology Co., Ltd.
Imveliso esisigxina yeMagnet
Inkqubela phambili kwezobuchwephesha yenzeke kuphela emva kokuphuhliswa koomazibuthe abanamandla amakhulu kwiimilo ezahlukeneyo kunye nobukhulu. Namhlanje, izixhobo zemagneti zineempawu ezahlukileyo zemagneti kunye nezomatshini, kwaye ke iintsapho ezine zoomazibuthe abasisigxina zinokusetyenziswa kuluhlu olubanzi kakhulu lwezicelo.
I-RUMOTEK Magnet inesitokhwe esikhulu semagnethi esisigxina kwiimo ezininzi kunye nobukhulu obahluka ngokwesicelo somthengi, kwaye ikwabonelela ngoomazibuthe abenziwe. Ngombulelo kubuchule bethu kwicandelo lezinto zemagnethi kunye neemagnethi ezisisigxina, siphuhlise uluhlu olubanzi lweendlela zemagneti yezicelo zorhwebo.
Yintoni ingcaciso yemagnethi?
Imagnethi yinto ekwaziyo ukwenza umazibuthe. Zonke iimagnethi kufuneka zibe nePole enye, kunye nePole enye yaseMzantsi.
Yintoni amandla kazibuthe?
Indawo yemagnethi yindawo yesithuba apho kukho amandla ombane abonakalayo. Amandla ombane anamandla anokulinganiswa kunye nolwalathiso.
Imagnetism ibhekisa kumandla okutsala okanye ukugxeka okukhoyo phakathi kwezinto ezenziwe ngezinto ezithile ezinje ngentsimbi, i-nickel, i-cobalt kunye nentsimbi. Lo mandla ukhona ngenxa yokuhamba kweentlawulo zombane ngaphakathi kolwakhiwo lweatom yezi zinto.
Yintoni umazibuthe "osisigxina"? Yahluke njani le "elecromagnet"?
Imagnethi esisigxina iyaqhubeka nokukhupha amandla ombane ngaphandle komthombo wamandla, ngelixa umbane wombane ufuna amandla ukuze kuveliswe umazibuthe.
Uyintoni umahluko kwimagnethi ye-isotropic kunye ne-anisotropic?
Imagnethi ye-isotropic ayijoliswanga ngexesha lenkqubo yokuvelisa, kwaye ke inokuba ngumazibuthe nakweliphi na icala emva kokuba yenziwe. Ngokwahlukileyo, umazibuthe we-anisotropic ubhencekile kumazibuthe awomeleleyo ngexesha lenkqubo yokuvelisa ukuze uqhelanise amasuntswana kwicala elithile. Ngenxa yoko, iimagnethi ze-anisotropic zinokufumana umazibuthe kwicala elinye; nangona kunjalo ngokubanzi baneempawu ezinamandla zemagneti.
Yintoni echaza ukubonakala kwemagnethi?
Ukuba kuvunyelwe ukuhamba ngokukhululekileyo, umazibuthe uya kuzilungelelanisa nomhlaba ongasentla-mzantsi womhlaba. Ipali efuna emazantsi ibizwa ngokuba "yipali yasemazantsi" kwaye ipali ekhomba emantla ibizwa ngokuba "yipali yasemantla."
Alinganisa njani amandla ombane?
Amandla Magnetic ilinganiswa ngeendlela ezimbalwa ezahlukeneyo. Nantsi imizekelo embalwa:
1) Imitha yeGauss isetyenziselwa ukulinganisa amandla endawo ekhutshwa yimagnethi kwiiyunithi ezibizwa ngokuba yi "gauss."
2) Tsala abavavanyi banokusetyenziselwa ukulinganisa ubungakanani bomazibuthe onokubamba iiponti okanye iikhilogram.
I-3) Iiperimeter zisetyenziselwa ukuchonga ngokuthe ngqo iimpawu zemagnethi yento ethile.